ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ် နှင့် ဂျင်းဆော့ | Wutyee Food House
« မလေးရှား ထမင်းကြော် (Nasi Goreng)
Pasta and Tuna Nicosie Salad (ပါစတာနှင့် တူနာ ဆလတ်သုတ်) »
ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ် နှင့် ဂျင်းဆော့
July 20, 2010 by chowutyee ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ် နှင့် ဂျင်းဆော့
ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ် ကြော်နည်းကို တင်ဖူးပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ဂျင်းဆော့လေးနဲ့ ဟိုတယ်စတိုင် ( ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ် နှင့် ဂျင်းဆော့) ဟင်းလေးကို တင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်တောင်ပံ အရိုးထုတ်ပုံ အဆင့်အဆင့်ကိုပါ သေသေချာချာ ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ တင်ပေးထားတဲ့ အတွက် ချက်ပြုတ်ရမှာ လွယ်ကူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရသာကတော့ ကောင်းလား မမေးနဲ့ ချက်ကြည့်လိုက်ပါ၊ ကြိုက်သွားမှာ သေချာပါတယ်နော်…
ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ ကြက်တောင်ပံ – ၁၀ခု
၂။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၄။ မုန်လာဥနီ – ၂လုံး (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၅။ ဘိုစားပဲ – ၇ခု (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၆။ ပြောင်းဖူးသေး – ၅ခု (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၇။ ဂျင်း – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က် (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၈။ ပဲငံပြာရည် အနောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁၀။ ကြက်ဥ – ၁လုံး
၁၁။ ကြက်သား – ၂တုံး (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၂။ အစာသွပ်ရန်အတွက် နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားသော (ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း၊ မုန်လာဥနီ၊ ပြောင်းဖူသေး၊ ကြက်သား (စားပွဲတင်ဇွန်း ၆ဇွန်း))၊ ဂျုံ (စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ ကြက်ဥ (တ၀က် ခလောက်)၊ နှမ်းဆီ (၃စက်)၊ ခရုဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း) အားလုံးကို သမအောင် ရောနုယ်ပေးပြီ ပန်းကန်လုံး တစ်ခုထဲ ထည့်ထားပေးပါ။
၆။ ပေါင်းပြီးလျှင် ကြက်တောင်ပံ များကို ဂျုံကပ်လိုက်ပါ။
၁။ ဂျင်း(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ကို ပါးပါးလှီးပြီ ကြက်သွန်ဖြူ(၂မွှာ) ကို နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်ထဲသို့ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း) ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းများကို ဆီသပ်ပါ။
၅။ ကြက်သွန်မြိတ် ပါးပါးလှီးအုပ်လျှင်ကောင်းသည်။
ရ။ ရလာသော ဂျင်းဆော့ရည်များကို ကြက်တောင်ပံအစားသွပ် ပန်းကန်ပေါ်သို့ လောင်းချလိုက်ပါ။
၈။ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ဟိုတယ်စတိုင် ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ် နှင့် ဂျင်းဆော့ကို တွဲဖက် စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 35 Comments	35 Responses
on July 20, 2010 at 2:29 pm | Reply hmone
yummy….i really wanna eat new styl of these dishes…i miss urs foodsahintahint…will try again…to sucess😉
on July 20, 2010 at 2:35 pm | Reply hmone
urs cooking skill is getting better and better and mkt is getting fatter and fatter lol
on July 21, 2010 at 1:46 pm chowutyee
သေချာတာပေါ့ ခုတောင် ၀လာလို့ ၀ိတ်လျှော့ခိုင်းနေရတယ်..🙂
on July 21, 2010 at 1:29 am | Reply နွေးနေခြည်
ငရီ.. ကြက်တောင်ပံအရိုးထုတ်ပုံကို အခုလို ပြထားတာ ကျေးဇူး။ ဒါလည်း ပညာပါတယ်။ တော်လိုက်တာ နာ့သယ်ရင်းလေးက
on July 21, 2010 at 2:02 pm | Reply chowutyee
ဟီးဟီး… အဲဒါလောက် ပြောတော့ ပြန်လာရင် လုပ်ကျွေးပါမယ် သယ်ရင်းရယ်..🙂
on July 21, 2010 at 5:03 am | Reply Evy
ကောင်းလိုက်တာဝတ်ရည်ရေ ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းထားတာကျေးဇူး။
on July 21, 2010 at 2:03 pm | Reply chowutyee
၀တ်ရည်လည်း တင်မယ် တင်မယ်နဲ့.. ခုမှပဲ သေသေချာချာ တင်ဖြစ်တော့တာ..
on July 21, 2010 at 5:03 am | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
လုပ်တော့စားချင်တယ် ကြက်တောင်ပံခွာရမှာ နည်းနည်းပျင်းသလိုဘဲ..
on July 21, 2010 at 2:04 pm | Reply chowutyee
မချောရေ…. ဂျူးလိယက် ၀တ္တုရေးလိုက်၊ ဟင်းချက်လိုက်နဲ့ အားကို မအားပါဘူး.. မချောစားချင် ဂျူးလက်လက်ရာကို အစွမ်းပြချင်ပါသေးတယ်..🙂
on July 22, 2010 at 2:11 am | Reply Tinna
Thank you so much for teaching me,
on July 22, 2010 at 11:08 am | Reply chowutyee
ွှThanks you too!😉
on July 22, 2010 at 7:00 am | Reply Haymar
ကြက်တောင်ပံအဆာသွပ်ကတော့ ရှယ်ပဲ။ နောက် ကြက်ခြေထောက် အဆာသွပ် လုပ်နည်းလည်း အဲလို အဆင့်ဆင့်ရေးပေးပါအုံးနော်… ဟီးဟီး (ကြက်တောင်ပံ အရိုးထုတ်နည်းသိသွားလို့ အပျော်လွန်ပြီးနောက်တာပါ)😀
on July 22, 2010 at 10:48 am | Reply chowutyee
on July 22, 2010 at 10:19 am | Reply soemyintaung
i am very interested ur web site, but cannot read, all are square, please help me, how to do.
on July 22, 2010 at 11:07 am | Reply chowutyee
Ko Soe Myint Aung, ဇော်ဂျီ font ကို ဒီ linkမှာ download လုပ်လို့ရပါတယ်
http://www.alpha.com.mm/blogday/image/IEZawGyiGtalkfont.EXE font ရှိရက်နဲ့ မရရင်တော့ Mozilla ရဲ့ Tool Menu-> Optins-> Content Tub-> Font&Colors မှာ zawgyi font ကိုရွေးလိုက်ပါ🙂
on July 25, 2010 at 7:02 am fatty
ဒါတွေလဲ တတ်တာလဲလား? :S
on July 26, 2010 at 4:48 pm | Reply leo
ကြက်တောင်ပံ အရိုးထုတ်နည်းလေး သင်ယူသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
on July 28, 2010 at 2:36 am | Reply chowutyee
hee thanks leo!🙂
on July 28, 2010 at 6:01 am | Reply KNSL
on August 1, 2010 at 9:10 am | Reply chowutyee
on July 28, 2010 at 11:37 pm | Reply KTC
on August 1, 2010 at 9:11 am | Reply chowutyee
You r so welcome!
on July 29, 2010 at 6:49 am | Reply ထားထား
မ၀တ်ရည်ရေ.အရိုးထုတ်နည်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ. မ၀တ်ရည် ချက်နည်းပညာလေးတွေကို အတုခိုးပီး ထားထား မနေ့က လုပ်စားဖြစ်တယ်.. သိပ်ကောင်းတဲ့အရသာဘဲ.. ကျေးဇူးပါနော့်..🙂
on August 1, 2010 at 9:20 am | Reply chowutyee
on August 7, 2010 at 5:31 am | Reply Hla Yamin Khine
on September 20, 2010 at 2:31 am | Reply chowutyee
Thanks to Ma Yamin!!🙂
on August 7, 2010 at 9:12 pm | Reply moe
today is very lucky for me ,before why I didn’t know this site . I don’t want sleep until 1:am so I go and visit to many site ,I really wanna eat and cook new style ,I want to know how to do take off bone from chicken wins, long time already.thanks alot I relly try to cook tomorrow ,
on August 8, 2010 at 3:43 am | Reply chowutyee
ကြက်တောင်ပံ ဟင်းကိုချက်ကြည့်ပါ.. အရမ်း စားလို့ကောင်းပါတယ်.. နောက်ဟင်းတွေလည်း ချက်ကြည့်ပါအုန်းနော်..😉
on August 8, 2010 at 8:27 pm | Reply moe
Hi ….I really ,really thanks to you, very delicious .you are so smart .tomorrow I will try to cook pork ribs. I think so may be alliter defierrent t because of hear can not by fresh , all frozen meet ,anyway I will try, thank you very mush for teaching .
on August 9, 2010 at 10:25 am | Reply chowutyee
Anyway thanks to moe also!! I m so much happy to share my knowledge to other? Thanks!:)
on October 9, 2010 at 1:26 am | Reply thida
ရှင်းပြတာ ကောင်းပါတယ်။ အရိုးထုတ်ပုံလေးကို ဗီဒီယို ဖိုင်လေးနဲ့ တင်ရင် ပိုကောင်းမယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကျွန်မက နည်းနည်း ဝေး လို့ပါ။ ကြည့်ရုံနဲ့ လုပ်တတ်ဘူး။
on October 9, 2010 at 3:29 pm | Reply chowutyee
အင်တာနက် ဒီထက် ပိုမြန်လာရင်တော့ ၀တ်ရည်လည်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပါ တွဲတင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်အင်တာနက်က သိတဲ့အတိုင်း အရမ်းနှေးတော့ အဆင်မပြေလို့ပါ..😛
on February 22, 2011 at 11:39 am | Reply Shar
Do you have explaination with English?? If you have, please give the website address.
on February 25, 2011 at 9:37 am | Reply chowutyee
Shar yay, Sorry about I don’t have english website. I did this site for Myanmar. Thanks you!😀
on February 22, 2011 at 11:43 am | Reply Shar
Do you have explaination with English? If you have, please give me your website. I like your meals. i wanna teach from you.